Ukuzibophezela ngokwemigaqo - Ihlabathi leMatshi
Ikhaya » Ukuzinikela kokuziphatha
Ingcali yoluntu kunye nososayensi uSalvatore Puledda wenza i-7 kaJanuwari ye-1989 e-Florence, inkulu yombutho wobuntu, inkolelo kuGalileo Galilei, uGiordano Bruno kunye nabanye abaphambili bezesayensi namhlanje. Ngeso sihlandlo waba kubonakale nokuzibophelela phakathi nxaxheba, ukulwa ngokugqibeleleyo phambili isayensi kwi inkonzo lwabantu.
Ukusuka kuloo msitho kwavela inyathelo kwiLizwe ngaphandle kweemfazwe ukwenza isenzo esikhuthaze kwaye sachaza ukuzibophelela kumaqela anomdla. "Ukuzibophelela kokuziphatha" kwenziwa kwaye isenzo sabanjwa kwiDyunivesithi yemfundo esekude eMadrid apho oonjingalwazi, oonjingalwazi kunye nabafundi bayenza ngeelwimi ezili-10.
Sisehlabathini apho abanye bazimisele ukuthengisa ulwazi lwabo nolwazi nangayiphi na injongo nayiphi na intengo. Ezi zijikeleze iplanethi yethu ngamashishini okufa. Abanye baye basebenzisa ubuchule babo ekuveleni iindlela ezintsha zokusebenzisa, ukuthulisa, ukuphazamisa isazela kubantu nakubantu.
Kwakhona amadoda nabafazi abaye basebenzisa Science and Ulwazi ukuthomalalisa ukudinwa nendlala, iintlungu nokubandezeleka Uluntu, ukususa gag ephuma emlonyeni isibhovubhovu, ukunika ilizwi uze ubanike ukuzithemba.
Namhlanje, ekuqaleni kwewaka wesithathu West, ukusinda lonke iintlobo zabantu zisengozini yaye phezu Earth, ikhaya lethu sonke, lo isiyaluyalu ntlekele zendalo kunye ntlekele yenyukliya esondeleyo.
Ngoko ke sicela ukusuka apha bonke oososayensi, abaphandi, abaqeqeshi kunye nootitshala behlabathi ukusebenzisa ulwazi lwabo ngenzuzo ekhethekileyo yoBuntu.
Ndiyathembisa (ukufungela) kubahlobo bam, ootitshala, intsapho kunye noogxa abangazange basebenzise ebomini bam ulwazi olwamkelweyo kunye nokufunda kwangomso ukucinezela abantu, kodwa ngokuchasene nokufaka isicelo sokukhululwa kwabo.
Ndizibophezele ukusebenzela ukupheliswa kwentlungu kunye nokukhathazeka kwengqondo.
Ndizibophezele ekukhuthazeni inkululeko yokucinga kunye nokufunda kwindlela yokungabikho gonyamelo ngokufuna "ukuphatha abanye njengoko ndingathanda ukuphathwa."
Ulwazi olungileyo lukhokelela ekubulungiseni
Ulwazi olulungileyo luyakuphepha ukulwa
Ulwazi olungileyo lukhokelela kwingxoxo kunye nokuxolelana
Simema ukusuka apha zonke iiyunivesithi, amaziko ophando, izikolo eziphakamileyo, izikolo ngenxa yoku, ukuzibophelela efanayo zokuziphatha ukuya noHippocrates wadala ukuba oogqirha yi sungula ukwenzela ukuqinisekisa ukuba lwazi lusetyenziswa ukoyisa intlungu kunye nokuhlupheka ukuba ekubhekeni Umhlaba.